Kachasịsịsịshia Ntụziaka Ka Tipping Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Kachasịsịsịshia Ntụziaka Ka Tipping Na Europe
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 01/04/2021)
Gburugburu ụwa, tipping nwere ihe dị iche iche pụtara na omume, ọmụmaatụ: Ọ dị na South Africa chọrọ, dị ka ọ dị na USA. A na-atụ anya ka ị hapụ onu nke dị n'etiti 15 na 25% na America, ma ọ bụrụ na ịchọghị, onye na-eche iwe nwere ike ịchụ gị ọsọ ọsọ. Ma gịnị banyere Europe? Ọtụtụ akwụkwọ ego na Europe ga-abụ ndụmọdụ gụnyere ya, Otú ọ dị, Nke a dịgasị iche iche site n'otu mba gaa n'ọzọ. Mara usoro ịkpa esi na obodo ị na-aga ga-egbochi ọgba aghara na echiche ndị na-adịghị mma. Yabụ gụkwuo maka ndụ kacha mma maka ịmezu na Europe!
Train Transport bụ The Eco-Enyi na Enyi Way To Travel. Isiokwu a na-e dere na-akụziri banyere Train Travel site Save A Train, Weebụsaịtị ndị ụgbọ oloko dị ọnụ ala N'ụwa.
Ntụziaka kachasị mma maka ịme ngọngọ na Europe Site na Ọrụ
Ntinye aka na Europe n'ozuzu ha dịgasị iche iche na-adabere n'ụdị ọrụ ị na-enweta. Ọmụmaatụ, A ga-atụ anya ka ị nyefee onye na-eche ihe n'ụlọ ebe nri kpakpando ise dị iche na sava dị n'azụ igwe. Bartenders agaghị atụ anya inweta ihe ma ọlị, ebe ndị ọkwọ ụgbọ ga-aga. Iji ezi uche gị, na mmesapụ aka bụ ụzọ dị mma isi na-aga mgbe ị na-ekpebi na ngụkọta ziri ezi. Ọzọkwa, otutu ebe choro inye gi ego, yabụ kpachara anya na-etinye obere Euro ole na ole mgbe niile.
N'ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ
Ọnọdụ ọ bụla ebe a na-ebute nri ma ọ bụ ihe ọ drinksụ toụ na tebụl na-achọkarị ndụmọdụ. Ọnụ ego ahụ dabere na ụdị nri ị na-eri. Standardkpụrụ usoro maka ịtọpụ na Europe bụ ịhapụ otu akwụkwọ ego Euro ma ọ bụ abụọ n'elu ego ahụ ma ọ bụrụ na enwere mmanya gburugburu mana onweghị nri enyere iwu. Nri zuru ezu na gburugburu ịnọdụ ala dị iche. N'okwu a, a few euros per person is usually sufficient. Five-star restaurants across Europe usually include the tip in their bill. Gbalịsie ike lelee nke a dịka ọ dịghị mkpa ịhapụ mgbakwunye ọnụahịa ọ gwụla ma ịnwere obi ụtọ maka ọrụ gị. Ọmarịcha ọrụ chọrọ oge ụfọdụ maka mgbakwunye, ya mere na n’ọnọdụ ndị a, ị nwere ike ịga n'ụzọ niile 15%.
Imirikiti ụlọ mmanya ma ọ bụ ụlọ mmanya gafere kọntinent ahụ anaghị atụ anya ka ndụmọdụ ahụ ma ọlị. A na-akwụ Bartenders ụgwọ ọnwa, mgbe ị ga-egosikwa mkpụrụ ego ole na ole n'ime akpa a, ọ dịghị mkpa. ma ọ bụrụ na ị nyere aka, cheta ọzọ iji naanị ego, ma ndetu ma ọ bụ mkpụrụ ego. Ọ bụrụ na ị nọ na njedebe rụrụ arụ ebe a bụ ndepụta nke 5 Best Ogwe na Live Music Na Europe.
Brussels na tiketi maka Amsterdam
Berlin na tiketi maka Amsterdam
Paris na tiketi maka Amsterdam
Stylists Ma Spa's
Otutu mmadu choro inweta ntutu ohuru ohuru, ma ọ bụ ịhịa aka na-atụrụ ndụ mgbe ezumike. Luckily you will find spas and stylists all over Europe, esiwak ndidi ke kpukpru obio. Isi Okwu, na nke ọ bụla, na-abụkarị ihe dị ka pasent iri. Y’oburu n’inwe obi uto n’ozi nke enyerela gi, ị nwere ike ịga elu dịka 15%.
Hotels bụ ajụjụ a na-ajụkarị ma a bịa na ajụjụ gbasara nhichapu Europe. Dịka iwu nke isi mkpịsị aka ukwu, mmadụ kwesịrị ịgbaso ụkpụrụ ndụ Euro Euro mgbe niile. Nke a pụtara na ị na-ahapụ otu Euro na ndụmọdụ maka otu ọrụ. Ọ bụrụ na bellhop ma ọ bụ onye na-ebu ihe na-ebu akpa gị, mgbe ahụ otu Euro n'otu akpa zuru ezu. Idebe ụlọ kwesịrị ịnata Euro kwa ụbọchị. Ppingpịpụ na ị na-agụ akwụkwọ bụ iji aka gị, mana ọ kwesịrị ịdabere na ọkwa ọrụ enyerela gị. Y’oburu na ha agafeela n’iru mee ka ihe gi ghara iju gi anya, mgbe ahụ ego nke euro ise ruo iri ma ọ bụ karịa gafere kwesịrị ekwesị.
Ihe ị ga-echebara tagzi And Transport
Taxi na Ubers bu ihe di n’ime ime Europe. Mgbe ị na-ahọrọ ihe ị ga-agbado, ọ kachasị mma iburu n’uche otu esi akwụ onye ọkwọ ụgbọala ahụ ụgwọ. n'ozuzu, ezie, ihe enyemaka Euro abụọ maka tagzi dị mkpirikpi ma ọ bụ njem Uber dabara adaba. Ngwa dị ka Uber na-enye gị ohere ịnye ọkwọ ụgbọ ala elektrọnik, ebe taxis ga-achọ ego. Ntinye aka na Europe mgbe ị na-eme njem bụ otu ihe ahụ ịsị mmadụ n'ụlọ mmanya ma ọ bụ n'ụlọ oriri. Buru n’uche na ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị mkpa, but often appreciated. Iburu tiketi ụgbọ oloko gị gị European njem dị mfe ma dị mfe na Ndị dị ọnụ ala Train Tickets weebụsaịtị Na Worldwa.
Kachasịsịsịsịshia Ntụzi Iji Tipping Na Europe Site Country
Ọtụtụ mba na-agbaso otu usoro iwu izugbe mgbe ọ na -aga nkwụsị nke Europe. N'ezie, mmadụ kwesịrị mgbe niile mee ihe ị chọrọ ime tupu ime njem iji hụ na ị tozuru oke. Train njem nwere ike ibuga gị ọtụtụ oge n’otu oge, yabụ ijide n’aka ihe ị ga-eme na nke ọ bụla na-enye aka mgbe niile. Fọdụ mba na-apụ iche na ndị otu ha na usoro iwu, Otú ọ dị.
Iceland na Scandinavia
Ma ọ bụ ihe na-atụfu mmalite sitere na Viking ha ka ọ bụ sọsọ dị mfe, Mba ndị a ka ị karie ka ị ghara ịkọ ma ọlị. Imirikiti ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ na ọrụ ga-enweta ọnụ ego a ga-etinye na ụgwọ ahụ. Ọ ka kwesịrị ịkọwa ụgwọ ahụ ruo Euro kacha nso kama ị nweta ego ma ọ bụ kaadị kredit.
Ndị Greek na-eme ihe niile dịtụ iche, na tipping bụ isịneke. Obere ụgwọ ego chọrọ obere ndụmọdụ na obere ego chọrọ ndụmọdụ ndị ka ukwuu.
Hapụ opekata mpe a 5% n'ọnụ, na ego maka sava, even if the bill includes gratuity. Cash is always king in most European countries, Austria anaghịkwa iche.
Ihe ị ga-enweta na Ireland Na Scotland
Amara na ọbụbụenyi ha, mba abụọ a ga-eji ọilyụ buru akpa gị. Itinye aka maka ndị na-echekwa mkpuchi adịghị mkpa, a naghị atụkarị anya ya. Imee amara na ịsị onye ọzọ na-ekele gị, Otú ọ dị, na-atụ anya. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịnata otu ọrụ ahụ n’ọdịniihu site n’aka onye na-eburu gị akụ, jide n'aka na ị ga-anabata ha.
Ihe ị ga-esi na Europe – Britain
Ọtụtụ ndị Britain anwaala ịkọwa ndị njem na-ekwu na ịpụcha ụlọ adịghị mkpa. Mgbe ọ na-abịa tipping na Europe, nke a bụ otu n'ime iwu siri ike. Ahapụla ọnụ n'ọnụ ụlọ ụlọ nkwari akụ gị, O yikarịrị ka ọ ga-enye ya na tebụl n'ihu dị ka furu efu ego. Bartenders na-atụghị anya ndụmọdụ, na tipping ha nwere ike oyi. Ihe ọ bụla, nwee omume enyi ma kweta na ị na-ere ahịa. Tinye mkpụrụ ego ole na ole n'ime ite a ma ọ bụrụ na enwere. Ọ bụrụ na bụghị, Kama ịhapụ isi ahụ pụọ na ndọtị ahụ.
Na-agbagharị Ozi niile gbasara itinye aka na Europe
Ndụmọdụ kachasị mma maka itinye aka na Europe bụ ịrụ ọrụ ụlọ gị. Gụọ ihe niile gbasara mba ahụ, ma ọ bụ obodo ị na-eme atụmatụ ịga. cheta na Njem ụgbọ oloko na-edukarị gị n'ọtụtụ mba ka inwere ike ịkwụsị na. Weta ego mgbe niile, mkpụrụ ego abụọ, na ego ole na ole idetu ego. Ọ bụrụ na ejighi n’aka na atumatu ndị a, rapara na iwu iri pasent maka ụlọ oriri, and the one Euro rule for everything else.
Cheta, Anyị hụrụ gị n'anya ịkụziri gị banyere Njem, yabụ mgbe oge ruru ma ị kpebie ime njem, cheta na Train Travel bụ ọpụrụiche ma họrọ Save A Train, ọ ga-amasị anyị inyere gị aka ịnụ ụtọ njem gị!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Kachasịsịsịshia Ntụziaka Ka Tipping Na Europe” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fguide-tipping-europe%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Na ndị na-esonụ njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- a njikọ bụ maka English ụzọ gasị ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, ma igbanwe de de fr ma ọ bụ tr na ọtụtụ asụsụ nke ị họọrọ.
#restaurant europetravel Food TippingEurope Train Travel traveltips Vacations
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Hungary, Inzọ Njem Italytali, Luxembourg ụgbọ oloko, Train Travel Switzerland, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe